Iswiidhan oo aan wax ka badaleeynin go’aankeedii dib u celinta Afgaaniyiinta | Somaliska
Dowladda Iswiidhan ayaa daboolka ka qaaday ineeysan wax is badal ah ku sameeyneyn go’aanka ay horey uga qaadatay qaxootiga reer Afgaanistaan.
Wasiiradda dhawaan loo magacaabay laanta socdaalkaHelene Fritzon, oo ka qeyb qaadaneeysay barnaamij ka baxa raadiyaha Iswiidhan ee P1-ka, ayaa sheegtay in go’aan ka gaarista cida dalka joogeeysa ama laga celinayo ay tahay mid ay leedahay laanta socdaalka, cid kasta oo magangalyo dalka weydiisata la marsiinayo sharciga dalka u dagsan.
Celinta muhaajiriinta reer Afgaanistaan gaar ahaan dhalaanka keli socodka ah ayaa waxaa aad uga guuxay urruradda u dooda xaquuqda aadanaha. Fatemeh Khavari oo ka tirsan ururka lugu magacaabo ”Ung i Sverige” oo dhinaceedana dhawaan banaanbaxyo lugu diidan yahay musaafirinta dhalaankaasi ayaa sheegtay
in amniga dalkaasi uu yahay mid weli aad u heeysa, islamarkaasina ugu baaqday dowladda in la joojiyo dib u celinta Afqaaniyiinta. Dhinaca kale madax sharciyeedka laanta socdaalka u qaabilsan Fredrik Beijer, oo maqaal uu qoray kaga hadlay arrimo badan oo quseeya celinta muhaajiriinta reer Afgaanistaan ayaa sheegay in ay ka war hayaan xaaladda amaan ee dalkaasi oo ay aad u xun tahay saas ii ay tahayna, ay jiraan meelo badan oo amaan ah, dadka halkaas lugu celinaya ay yihiin shaqsiyaad kala duwan.
Wuxuu sheegay misna in u kuura gelid ay ku sameeyeen xaalada dalkaasi ay tustay natiijo ka duwan sida xaalka yahay, islamarkaasina aan dhamaan dadka reer Afgaanistaan la wad siin karin dal ku joog. Wuxuu sidoo kale htilmaamayoosta in 83% dhalaanka keli socodka ah ee dalkaasi ay siiyeen nabad galyo iyo sharci ay Iswiidhan ku joogaan.
Ugu dambeyntii sanadku markuu ahaa 2015-kii, ayey muhaajiriin u dhashay dalka Afgaanistaan oo tiradooda gaareeysay 40.000 yimaaeen dalkan, kana codsadeen dowlada in ay siiso magangalyo, dadkan oo intooda badan la siiyey sharciga daganahaan shaha. Halka qaar kalena dib loogu celiyey dalkoodi, ka dib markii waaxda daawaweeynta sharciga ay xaqiiqisay in dhalaalaan kelinimada ku yimid ay ka weeyn yihiin 18 jir, iyadoo ay misna socoto baarita xagga da’da ah.